မခိုင်က ရှေ့မီ နောက်မီဆိုတော့ ဝါရင့် သရုပ်ဆောင်တွေရော အငယ်ပိုင်းတွေနဲ့ပါ ရင်းနှီးပြီး အဆင? - Yangon Media Group
မခိုင်က ရှေ့မီ နောက်မီဆိုတော့ ဝါရင့် သရုပ်ဆောင်တွေရော အငယ်ပိုင်းတွေနဲ့ပါ ရင်းနှီးပြီး အဆင?
အိမ်ထောင်ရေး စံပြအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံထားရသော သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည်၏ အိမ်ထောင်ရေး ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် သမီးဖြစ်သူအ ပေါ် ဆုံးမသွန်သင်မှုများနှင့်ပတ် သက်ပြီးတော့ အခုလိုပဲတွေ့ဆုံမေး မြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
မေး – အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့’မယား ကြောက်ရွာ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး က မကြာခင်ရုံတင်ပြသတော့မယ်ဆို တော့ ပါဝင်ထားတဲ့ကာရိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ – အဲဒီဇာတ်ကားမှာ မခိုင်လေးက ကိုခန့်နဲ့ လင်မယားပေါ့နော်။ ကိုခန့်နဲ့ကကျတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လက်တွဲလုပ်လာတာ နှစ်ကြာနေပြီဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိပ်ပြီးတော့တိုင်ပင် နေစရာမလိုဘူး။ မခိုင်လေး ဘာလုပ်ရင် သူကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိသလို သူကရှေ့ကနေ ပြီးတော့ တစ်ခုခုလုပ်ပြလိုက်ရင် မခိုင်ဘက်က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုသိတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါ ကြောင့် အတွဲညီညီနဲ့သရုပ်ဆောင်ထားတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
မေး – သမီးဖြစ်သူနဲ့ အင်္ကျီဆင်တူ လေးတွေဝတ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ချစ်ကြ တဲ့သူတွေလည်းရှိသလို ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိတယ်နော်။
ဖြေ – ကလေးနဲ့ ဖက်ရှင်ဆင်တူ လေးတွေဝတ်တယ်။အရင်တုန်းက ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ ဖက်ရှင်ဆင်တူလေးတွေဝတ်ရင် အပြောခံရမှာကြောက်ပြီး တော့ အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ ဆင်တူမဝတ်ချင်တော့ဘူးလို့သမီးကို ပြောလိုက်တယ်။ ဟိုနေ့ကတော့ သမီးက အင်္ကျီဆင်တူလေးဝတ်ချင်တယ်လို့ပြောလာတော့ မခိုင်ကတော့ လူကြီးဆန်ဆန်အရှည်လေးနဲ့ သူက တော့ အတိုလေးနဲ့ပေါ့နော်။ အမှန် အတိုင်းပြောရရင် သမီးနဲ့ကဆင်တူ လေးတွေဝယ်ထားတော့ ဆင်တူဝတ်ချင်တယ်။ သမီးနဲ့အမေဆင်တူလေး တွေဝတ်လို့ ချစ်ကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ပြောတဲ့သူတွေကလည်း ပြောကြတာပဲလေ။ ပြောတဲ့သူတွေကလည်း ပိုပြောကြတယ်။
မေး – မခိုင်လေးတို့ရဲ့အိမ်ထောင် ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အားကျအတုယူနေကြတာတွေလည်းရှိတယ် ပေါ့နော်။ အိမ်ထောင်ရေးကျတော့ ဘယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းလဲ။
ဖြေ – အိမ်ထောင်ရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ဂရုစိုက်ပြီး တော့ နေထိုင်တာတော့ မရှိဘူး။ အဓိကကတော့ နားလည်မှုနဲ့ တကယ်လည်းချစ်လို့ယူခဲ့ ကြတာဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြစ်လုပ်ထားလည်း အပြစ်မမြင်တော့ဘူးပေါ့နော်။
မေး – သရုပ်ဆောင်အသစ်တွေနဲ့ လက်တွဲရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ အသစ် တွေက မခိုင်ကို ရှိန်နေတာမျိုးရော ရှိလား။
ဖြေ – မခိုင်က ရှေ့မီနောက်မီပေါ့ နော်။ ကိုခန့်တို့ ကိုလူမင်းတို့ဆိုရင်လည်း အကုန်လုံးနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ တကယ့်ကို မောင်နှမတွေလို ဖြစ်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေလို ရင်းနှီးကြတယ်။ မခိုင်က အနုပညာလောကထဲ စရောက်တုန်းကဆိုရင် လူချစ်လူခင်လည်း မပေါဘူး။ မခိုင်က ကြောက်တတ်တယ်လေ။ အဲဒီတော့တစ်ယောက်တည်း ဘယ်သူနဲ့မှလည်း စကားမပြောရဲတော့ စကားမပြောဘူး။ ချေနေသလိုဖြစ်နေတာ။ လူမှု ရေးညံ့တာပေါ့နော်။ အငယ်တွေနဲ့ ကျရင်လည်း ကိုယ်ကသူတို့ထက် အသက်ကြီးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က သူတို့ထက် ကြီးတယ်ဆိုတာကို မေ့နေကြတယ်။ အပြင်မှာလည်း ပျော်ပျော်ပဲ နေတဲ့အခါကျတော့ သူ့တို့စိတ်ထဲမှာ သူငယ်ချင်းအ ပေါင်းအသင်းလိုမျိုး ခင်ကြတယ်။ ကားရိုက်တော့လည်း ရှိန်မနေကြ တော့ဘူးပေါ့။